Golaha Degaanka Badhan oo la dhaariyay iyo dumarka oo tiradii ugu badnayd golayaasha degaanka Puntland. – Radio Daljir
Golaha Degaanka Badhan oo la dhaariyay iyo dumarka oo tiradii ugu badnayd golayaasha degaanka Puntland.
Maarso 21, 2011 12:00 b 0
Badhan, Mar 20 – Golihii deegaanka ee degmada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta la dhaariyey kaddib markii beelaha degmadaasi ay soo xusheen xildhibaannada golaha ee degmadaasi ay yeelanayso, kuwaasi oo maalmihii ugu danbeeyey lagu hawllana.
Mudanayaasha golaha deeegaanka ee maanta dhaariyey ayaa la tilmaamayaa in ay gaarsiisan yihiin illaa iyo 27 xubnood kuwaasi oo sagaal ka mid ah ay dumar yihiin, waxaana golahaani uu noqday golihii deegaan ee haween intaasi le’eg ay xubno ka noqdaan.
Inkasta oo sharciga golayaasha deegaanka ee Puntland oo qabo in xubnaha golaha deegaanka ee degmo walba 30% in ay dumar yihiin sharci ahaan marka loo fiirshana tani ay tahay mid lagu fariisiyey shacigaasi golayaasha. haddana waxaa la tilmaamayaa in ay tahay markii ugu horraysay oo la fuliyo xeerkaasi, waxaana suurtoobidda arintaan gacan-weyna ka gaystay wasaaradda hormarinta haweenka iyo arrimaha qayska Puntland oo ku dadaashay in haweenku ay u soo baxaan hanashada xilalka golaha deegaanka ee degmada Badhan.
Faaduma Jabriil oo la taliye u ah wasaaradda haweenka Puntland ayaa sheegtay in tallaabadan guusha ahi ay ka dambeeysay dadaal ay sameeyeen hogaanka wasaaradda kan khubarada iyo kan haweenka degaanka oo si dhab ah ula xisaabtamay cuqaasha degaanka. Faaduma waxa ay sheegtay in cuqaashi asalkii caqabad ku ahaayeen in howlahan oo kale lagu tallaabsado, waxayna sheegtay in ay gabdhihii ay yeeshaan xirfad ay kula xisaabtami karaan hogaanka dhaqanka.
Waxa lagu wadaa in gabdhuhu qaar u tartamaan hogaanka degmada. Doorashada hoggaanka golaha degaanka ayaa dhici doonta Subaxnimada Isniinta.
Halkan ka dhagayso waraysiga Faduma Jibriil oo dhamaystiran.
Baahin: Arbaca, Mar 23, Weriye Xuseen Madar ~ Daljir ~ Boosaaso. Xaaladda Abaaraha: Wasiirka maaliyadda Puntalnd oo shir ganacsi kaga warbixiyay xaaladda abaaraha iyo dowrka dawladda … Boosaaso: Dib-u-habayn lagu sameeynayo xarunta dawladda hoose ee Boosaaso … Carmo: Duqa degmada oo booqday degaannada abaaruhu saameeyeen kadibna Daljir la hadlay … Garoowe: Tababar loo soo gabagabeeyay saraakiisha wasaaradda xannaanada xoolaha …
Baahin: Axad, Mar 20, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo . Garowe: 40 gabdhood oo ka kala socda gobollada Puntland oo uu u furtay tababar ku saabsan horumarinta hawlaha & adeegyada bulshada. … Badhan: Golaha deegaanka ee degmada Badhan oo la dhaariyey, ka kooban 27 xubnood oo 9 ka mid ahi ay gabdho yihiin; Mawro Fatima J. Jibriil oo aan ka waraysanay tubta loo maray dhismaha golaha deegaanka … Garowe: Dr. C/llahi Cali Warsame, wasiirka caafimaadka ee Puntland oo aan ka waraysanay dib u habaynta xarumaha caafimaad ee gobollada Puntland … Muqdisho: Xil. Cismaan C. Boqorre oo aan ka waraysanay kulamo wadatashi oo Nairobi & Muqdisho ka socda, kuna saabsan aayaha dawlada federaalka ah …